Big City Small World (Series 1 Episode 12 - Good News & Bad News) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on November 2, 2012 at 13:37 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series 1 Episode 12 - Good News & Bad News (အတွဲ (၁)၊ အပိုင်း (၁၂) – သတင်းကောင်းနဲ့ သတင်းဆိုး)
Series 1 Episode 12 - Good News & Bad News ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
In the final episode of this season, find out about Magda's new job and how Sarah dealt with her intrusive landlord. Harry has some surprising news and Johnny hasabig decision.
Big City Small World အတွဲ (၁)၏နောက်ဆုံးအပိုင်းတွင် Magda ၏ အလုပ်သစ်အကြောင်း၊ ထို့နောက် Sarah က သူ၏ အနှောင့်အယှက်ပေးသော အခန်းပိုင်ရှင်ကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ကြောင်း၊ Harry က အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသည့် သတင်းများ ရှိခြင်းနှင့် Johnny က ဆုံးဖြတ်ချက် ကြီးကြီးမားမားချလိုက်ခြင်းတို့ကို လေ့လာပါ။
မင်္ဂလာပါ Magda! နင့်ရဲ့  ပထမဦးဆုံးနေ့က ဘယ်လိုလဲ?
တကယ်လား? ငါအရမ်း အံ့သြတာပဲ…
ဟုတ်တယ်၊ နင်က နင့်ရဲ့  အလုပ်သစ်အကြောင်းကို အရမ်းစိုးရိမ်နေတာလေ…
အင်း၊ ငါ့မှာ ပြောပြစရာ သတင်းကောင်းတွေရှိတယ်...
ဟိုင်း! င့ါမှာ ပြောပြစရာ သတင်းကောင်းရှိတယ်…
အနည်းဆုံးတော့ ငါက သတင်းကောင်းလို့ ထင်တာပဲ... ငါသိပ်မသေချာဘူး...
အိုး၊ ဒါက ပိုရှုတ်ထွေးလာပြီ... ပြီးတော့ ငါ့မှာတော့ သတင်းဆိုးပဲ ရှိတယ်...
မဟုတ်သေးပါဘူး... စိတ်မကောင်းစရာပဲ! ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ?
ဟုတ်ပါပြီ၊ သတင်းဆိုးကို အရင်ပြောပါဦး။ ပြီးတော့မှ သတင်းကောင်းနဲ့ ပျော်ပျော်နေတာပေါ့!
ဟုတ်ပြီလေ၊ နောက်ဆုံးတော့ ငါ့ အခန်းပိုင်ရှင်နဲ့ စကားများခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ငါပြောင်းတော့မယ်…
ဟုတ်တယ်! အဲ့ဒီတော့ ငါအခန်းသစ်လိုတယ်…
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ ငါက အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတာ...
ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ငါက အခန်းပိုင်ရှင်နဲ့ အဆင်မပြေဘူးလေ။
Fadi ကို ပြောပြီးပြီလား?
ဟင့်အင်း… သူဘာတွေးမလဲဆိုတာကို ငါစိုးရိမ်နေတယ်။ ဘာပဲပြောပြော အခန်းပိုင်ရှင်က သူ့အစ်ကို ၀မ်းကွဲလေ…
သူလာတဲ့အထိ စောင့်ကြတာပေါ့။ နင် မပျော်ဘူးဆိုတာကို ငါက သူ့ကို ပြောတော့မလို့ဘဲ - ခုတော့ ငါက နင် ပြောင်းတော့မယ် ဆိုတာကို ပြောရတော့မယ်!
သတင်းကောင်း ပြောဖို့ အချိန်ရောက်ပြီလား?
အင်း! ပြောပါဦး! နင့်သတင်းကောင်းက ဘာလဲ?
ခဏလေး! ခဏနေပါဦး! နင်အလုပ်ရပြီးပြီမဟုတ်လား Magda?
နင်ရောပဲလေ Johnny မဟုတ်ဘူးလား? နင်ပဲ အမြဲပြောနေပြီးတော့...
မဟုတ်ပါဘူး။ နင်အရင်ပြောပါ၊ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့…
ငါ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းလုပ်ဖို့အတွက် ကမ်းလှမ်းခံရတယ်လေ၊ လက်ရှိကုမ္ပဏီမှာပဲ! ငါ တကယ့် ဗိသုကာပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တော့မယ်!
အမြဲတမ်း “ဒါပေမယ့်” ချည်းပဲ...
ငါ ရဲ့ မဟာဘွဲ့ကနေ ဂုဏ်ထူးထွက်ဖို့လိုတယ်...
ဟင့်အင်း၊ ဒါပေမယ့် ငါကတော့ အဆင်ပြေနေပါတယ်...
အဲ့ဒါအရမ်းမိုက်တာပဲ – ငါ့မှာလဲ နင့်လို သတင်းမျိုးရှိတယ်!
ဘာလဲ? နင်လည်း ဗိသုကာပညာရှင်ဖြစ်တော့မှာလား?
အလုပ်လေ… ငါလည်း အလုပ်သစ်အတွက် ကမ်းလှမ်းခံထားရတယ်!
ပြီးတော့ “ဒါပေမယ့်” ဆိုတာရှိသေးတယ်လေ...
ငါနင့်ကိုပြောသားပဲ အမြဲတမ်း “ဒါပေမယ့်” ဆိုတာရှိပါတယ်ဆို...
အလုပ်က လန်ဒန်မြို့ မှာ မဟုတ်ဘူး...
ပဲရစ်? ဘာလင်? ဘယ်မှာလဲ?
အို... ဘေဂျင်းမှာလား? ရှန်ဟိုင်းမှာလား?
မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲ့ဒါက Chongqing မှာ။
Magda: Where’s that?
တရုတ်ပြည် အနောက်တောင်ဘက်မှာ။ တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာနော်… တကယ်ကို လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ တိုးတက်နေတာ။
ဟုတ်တယ်၊ အဲ့ဒါက အခွင့်အရေးကောင်းပဲ...
ဒါပေမယ့် ငါဒီနေရာကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ တရုတ်ပြည်ကို ပြန်ချင်လားတောင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်မသေချာဘူး – ငါ့ သူငယ်ချင်းတွေ အကုန်လုံးကို လွမ်း နေမှာ...
ဒါဆုံးဖြတ်ချက် ကြီးကြီးမားမားချရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ... အလိုလေး... Fadi လာနေပြီ... Harry ရောပဲ။
ဟိုင်း Fadi! ဟိုင်းHarry!
ငါ အလုပ်သစ် ကမ်းလှမ်းခံရတယ်၊ တစ်ကယ်ကောင်းတဲ့အလုပ် – ငါဘွဲ့ကောင်းကောင်းရရင်ပေါ့!
ငါ အလုပ်သစ် ကမ်းလှမ်းခံရတယ်၊ တစ်ကယ်ကောင်းတဲ့အလုပ် – ဒါပေမယ့် ငါ တရုတ်ပြည်ကို ပြန်ရလိမ့်မယ်!
၀ိုး! အားလုံးအတွက် အလုပ်များတဲ့နေ့ပဲ… ငါလည်း သတင်းတွေပါလာတယ်…
အို ဟုတ်တာပေ့ါ – ငါအလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရပြီ!
ဟုတ်တယ် – ငါအလုပ် ဆုံးရှုံးသွားပြီ၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီ၊ အလုပ်အကိုင်မဲ့လေ၊ အလုပ်မရှိတော့ဘူး !
စိတ်မပူပါနဲ့ – ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ငါအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလည်း မုန်းနေတာပဲကို။ မကြာခင်မှာ နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခု ရှာတွေ့မှာပါ။ ငါ့လိုမျိုးစွမ်းရည်နဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့သူကို အမြဲလိုအပ်နေမှာပါ!
ငါ့ကုမ္ပဏီက တစ်ယောက်ယောက်က မင်းကို အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တယ်? ဘာလို့လဲ?
ငါက သူတို့ကို စနေ၊ တနင်္ဂနွေရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ ငါသာ စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေမှာ အလုပ်လုပ်ရရင် ဘယ်အချိန်ဘောလုံးသွားကန်ရမလဲ? ဒါကြောင့် ငါက ဟင့်အင်းလို့ ပြောလိုက်တယ် ပြီးတော့ သူတို့က တာ့တာ တဲ့…
Magda: What will you do now?
ငါ့မှာ ဘာအကြံဥာဏ်မှ မရှိသေးဘူး! အနာဂတ်ဆိုတာ ဖွင့်ထားတဲ့ စာအုပ်လိုပဲ…
ကဲ Sarah အနည်းဆုံးတော့ နင်အဆင်ပြေနေတာပေါ့… နင့်ရဲ့အခန်းသစ်ရော အကုန်လုံးရောပေါ့…
တကယ်တမ်းတော့ ငါက နင့်ကို နင့်ရဲ့  အစ်ကို ၀မ်းကွဲအကြောင်းပြောချင်နေတာ...
ငါ့ကို နင်က ပြောချင်တယ်?
(တိုးတိုးလေးပြောသည်) အင်း၊ နင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Sarah က နည်းနည်း စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်နေတယ်…
သူ့ရဲ့  တိုက်ခန်းအသစ်ကနေ ပြောင်းချင်နေတာ… အခန်းပိုင်ရှင်နဲ့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး…
အင်း နင့်အစ်ကို ၀မ်းကွဲနဲ့။
ငါတော့ မအံ့သြပါဘူး လို့ပြောတာ! ငါ့အစ်ကို ၀မ်းကွဲက ဆိုးလွန်းတယ်၊ ငါတောင်သည်းမခံနိုင်ဘူး!
Sarah နင့်ကို ငါ့အစ်ကိုဝမ်းကွဲနဲ့ ပတ်သက်စေမိတာ ငါတောင်းပန်ပါတယ်... ငါက နင်နေစရာ နေရာ အရေးတကြီးလိုနေတယ် ထင်လို့ပါ... ငါ့အစ်ကိုဝမ်းကွဲ ဆိုးတာ ငါသိပါတယ်!
အို စိတ်ထားမထားပါနဲ့ Fadi – နင်ကူညီတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ... ငါကတော့ အခုဆိုရင်နေစရာ နေရာအသစ် လိုလာပြန်ပြီ။
Magda: If I get this job, I’ll have more money – we could getaplace together...
ငါသာ ဒီအလုပ်ရရင် ပိုက်ဆံလည်းပိုရမှာ – ငါတို့တူတူနေဖို့နေရာ ရှာလို့ရတာပေါ့...
အကယ်၍ ငါသာ တရုတ်ပြည်သွားဖြစ်ရင် ငါ့အခန်းကို ထားခဲ့ရမှာ...
Magda: But also worrying...
ဘာ? အိုး… ဆိုးရွားလိုက်တာ…မဟုတ်သေးပါဘူး… ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ??
Permalink Reply by MS.KHINMYOHTET on November 5, 2012 at 16:34
This isareally good topic for learner.
Permalink Reply by Thike Htun on November 9, 2012 at 12:38
Permalink Reply by Khine Zin Oo on November 20, 2012 at 16:34
Thank you so much for your Teaching English Lesson.
Permalink Reply by Kyaw Zin Than on January 21, 2015 at 15:10
Permalink Reply by Kyaw Zin Than on January 21, 2015 at 15:11